အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အစဉ်အလာများ - နိုင်ငံ၏ထူးခြားချက်များ | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 16/06/2021 08:50 | ယဉျကြေးမှု, အမေရိကန်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများအကြောင်းပြောဆိုခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်countryရာမနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးယဉ်ကျေးမှုမြောက်မြားစွာအတူတကွတည်ရှိပြီး၎င်းတို့တစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ရှိသည် ကိုယ်ပိုင်အစဉ်အလာ။ ဥပမာအားဖြင့်, အားကြီးသောရှိပါတယ် တရုတ်အသိုင်းအဝိုင်း ၎င်း၏ပွဲလမ်းသဘင်များနှင့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအီတလီ၊ အိုင်ယာလန်၊ လက်တင်အမေရိကသို့မဟုတ်အာဖရိကသားတွေနဲ့အတူတူပြောပြနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာကျော်အတွင်း၌နိုင်ငံသည်စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည် ဘုံအမေရိကန်အကောက်ခွန်နှင့်အစဉ်အလာ ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့အား၊ သူတို့ကိုသင်သိလိုလျှင်ဆက်ဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
1 အမေရိကန်ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများ - ခရစ်စမတ်နေ့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းသို့
1.5 ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာများအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်
1.6 Spring Break နှင့်ကျောင်းသားကမ္ဘာနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအမေရိကန်ဓလေ့ထုံးတမ်းများ
အမေရိကန်ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများ - ခရစ်စမတ်နေ့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းသို့
သက္ကရာဇ်စဉ်အတိုင်းအမိန့်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာနိုင်သော်လည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုသင့်အားပြောပြရန် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသည်။ အရေးအပါဆုံး။ ဆိုလိုသည်မှာနှစ်၏ရက်စွဲများအားဖြင့်မည်သည့်အမှာစာကိုမဆိုယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နို ၀ င်ဘာလတွင်ကျင်းပခဲ့သည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
အမှန်စင်စစ်ဖြစ်ကောင်း quintessential မြောက်အမေရိကအစဉ်အလာ၏ဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်။ ပြီးတော့မြောက်အမေရိကကိုလည်းအဲဒီပွဲတော်မှာကျင်းပတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် ကနေဒါ, အဘယ်သူ၏အကောက်ခွန်ပြီးသားနိုင်ငံ ငါတို့ဘလော့ဂ်မှာတင်ထားတဲ့ post ကိုငါတို့ဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့တယ်.
ဖြစ်ပျက်သည် နိုဝင်ဘာလ၏စတုတ္ထကြာသပတေးနေ့ မူလက၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စပါးရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်နေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးတွင်အလားတူပွဲများကျင်းပကြသည်။ များစွာသောသူတို့အတွက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဆက်လက်, ဒါပေမယ့်အမေရိကန်၌ရှိသကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်။
မြောက်အမေရိကနိုင်ငံများတွင်ပွဲတော်သည် ၁၆၂၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည် Plymouthလက်ရှိမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်, ကဒေသခံများနှင့်အခြေချနေထိုင်သူများသည်သူတို့၏အစားအစာများကိုမျှဝေသုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဤနှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ၁၆၆၀ ခုနှစ်အထိထပ်မံကျင်းပခြင်းမရှိသေးပေ။ သို့သော်အခြားသမိုင်းပညာရှင်များသည်ပထမဆုံးသော Thanksgiving အခမ်းအနားကိုအခြားသမိုင်းပညာရှင်များကကျင်းပသောကြောင့်၊ စိန့်သြဂတ်စတင်း, ဖလော်ရီဒါနှင့် 1565 ခုနှစ်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုဤတန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုကိုယနေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အရေးအကြီးဆုံးအစဉ်အလာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားကျင်းပကြသည် ချီတက်ပွဲ, သို့သော်ထိုအဖြစ်အပျက်၏မီးမောင်းထိုးပြထိုညဉ့်ကိုမိသားစုညစာစားပွဲများတွင်ဖြစ်ပျက်။
နိုင်ငံ၏areaရိယာတစ်ခုစီတွင်၎င်း၏ထူးခြားချက်များရှိသည်၊ သို့သော်၎င်း menu ၏အဓိကအပိုင်းမှာဖြစ်သည် ကြက်ဆင်။ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုရယ်စရာကောင်းသောလေသံဖြင့်ရည်ညွှန်းသည် တူရကီနေ့ ဒါမှမဟုတ် "ကြက်ဆင်နေ့" ။
ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်လှော်ပြင်ဆင်ပြီး၎င်းကိုဘလူးဘယ်ရီငံပြာရည်နှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ တစ် ဦး အပါအအဖြစ်ကအာလူးနှင့်ဒါခေါ် mashed သိရသည် အစိမ်းရောင် bean ကို casseroleကြက်သွန်ကြော်၊ အစိမ်းပဲနှင့်မှိုမုန့်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသက်သတ်လွတ်စားစရာ။
Thanksgiving Day တွင်ပိုမိုခေတ်မီသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းပြောပါ Black ကသောကြာနေ့, ထိုနောက်ချက်ချင်းအရပျကိုကြာပါသည်။ သောကြာနေ့အနက်ရောင်သည်သူတို့စတင်သောအချိန်ဖြစ်သည် ခရစ်စမတ်ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း နှင့်ကြီးမားသောလက်လီချည်နှောင်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလျှောက်ထား။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာငါတို့နိုင်ငံကိုပါရောက်လာပြီ။
၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နာမကိုအမှီအကြံပြုအဖြစ်ကပြန်ပြောပြသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွတ်လပ်ရေးကြေငြာ အရာဇူလိုင်လ 4, 1776 ရက်တွင်အများပြည်သူဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
ထိုအချိန်ကဗြိတိသျှကိုလိုနီ ၁၃ ခုသည်အင်္ဂလိပ်အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်လုံးလုံးလျားလျားသီးခြားစီခွဲထွက်ခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်စစ်ပွဲတစ်ခုရင်ဆိုင်ရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ လွတ်လပ်ရေးနေ့သည် ၁၈၇၀ ခုနှစ်တွင်ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သောကြောင့်တိုင်းပြည်၏ရှေးအကျဆုံးပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ချီတက်ပွဲများ၊ ဘေ့စ်ဘောဂိမ်းများ၊ မီးရှူးမီးပန်းများနှင့်အခြားအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းတွင်ကျင်းပကြသည် အဆိုပါမျိုးချစ်ချီးမြှောက်ခြင်း နိုင်ငံသားများ၏။
ယခင်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သောယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစည်းမှုအကြောင်းသင်ပြောခဲ့သည်။ သူတို့တွင်အများဆုံးမြောက်မြားစွာတစ်ခုဖြစ်သည် အိုင်းရစ်။ ဗြိတိသျှကျွန်းတွင်နေထိုင်သူမြောက်များစွာသည်မြောက်အမေရိကနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာကြသည်။ လက်ရှိတွင်အိုငျးရစျအမြိုးသား၏လူ ဦး ရေ ၃၆ သန်းကျော်သည်ဤအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်
ဤအချက်များအားလုံးသည်သက်ဆိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပနိုင်ငံမှပေါ်ပေါက်လာသောပွဲတော်အကြောင်းသင့်အားသင်ပြောတော့မည် စိန့်ပတ်ထရစ်နေ့။ သို့သော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ယဉ်ကျေးမှုသည်၎င်းကို၎င်း၏အရေးအပါဆုံးနှင့်လူကြိုက်များသောဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
တကယ်တော့, အမေရိကရှိသူတော်စင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအောက်မေ့ဖွယ်ချီတက်ပွဲကျင်းပခဲ့သည် မတ်လ 17 နယူးယောက်ရှိ 1762 ၏။ ဆိုလိုသည်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်လွတ်လပ်သောနိုင်ငံမဖြစ်မှီကတည်းကဖြစ်သည်။ လက်ရှိနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနှင့်ထိုနေ့စွဲအပေါ်တိုင်းပြည် အစိမ်းရောင်ဆိုးသည်, အိုင်ယာလန်၏ပုံမှန်အရောင်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏မြို့ကြီးများနှင့်မြို့ကြီးများမှတဆင့်ချီတက်ပွဲများရှိသည်။ အခမ်းအနားအတွက်ပျောက်ဆုံးနေသည်မဟုတ် ဘီယာမြောက်အမေရိကတွင်ပုံမှန်သောက်သုံးမှုဖြစ်သည့်ဥရောပနိုင်ငံ၌သောက်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။
ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များကိုအနောက်ကမ္ဘာအနှံ့ကျင်းပကြသည်။ ထိုအခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခြွင်းချက်ဖြစ်မသွားခဲ့သည်။ တကယ်တော့အမေရိကန်တွေအတွက်အရမ်းအရေးကြီးတဲ့အားလပ်ရက်တစ်ခု။ သူတို့အတွက်၎င်းသည်အခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များပါဝင်သည် ခရစ်စမတ်အကြိုညစာနှင့်ခရစ္စမတ်နေ့လည်စာ, ဒါပေမယ့်လည်းအခြားပိုင်ထိုက်သောနှင့်ဌာနေအကောက်ခွန်။
အဆုံးစွန်သောသူတို့တွင်သူတို့၏အိမ်များကိုအလင်းများဖြင့်အလှဆင်ခြင်း၊ ဆန်တာကလော့စ် သူ့ကိုသူ၏လက်ဆောင်များသို့မဟုတ်စွန့်ခွာရန်အဘို့ mistletoe ထုံးစံ o ရာမ။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည်၊ စုံတွဲတစ်တွဲလက်အောက်သို့ရောက်တိုင်း၎င်းတို့သည်အသီးတစ်ပွင့်ကိုအနမ်းနှင့်ကောက်ရသည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာများအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်
ဟယ်လိုသည်အမေရိကန်အားလပ်ရက်မဟုတ်ပါ။ သမိုင်းပညာရှင်က၎င်း၏ဇာစ်မြစ်နေရာ Samhain အဆိုပါကဲလ်တစ်၏။ ဤအယူမှားဘာသာရေးထုံးတမ်းသည်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတွင်ရိတ်သိမ်းခြင်း၏အဆုံးကိုအောက်မေ့။ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ်ဟယ်လိုဝင်းတွင်အသီးများရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ၊ သို့သော်ထိုနေ့တွင်ပင်ဆက်ကျင်းပသည်။ အမှန်မှာမြောက်အမေရိကပိုင်နက်တွင်ရာစုနှစ်ချီ။ ထွင်းထုထားသည် ရွှေဖရုံသီး ကလေးငယ်များသည်စုန်းမများသို့မဟုတ်အခြားလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဇာတ်ကောင်များအဖြစ်ဝတ်စားဆင်ယင်ကြပြီးအိမ်များကိုအလှဆင်ထားသည်။
သို့သော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆုံးပုံမှန်အစဉ်အလာဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါလှည့်ကွက်သို့မဟုတ်အားရစရာနှင့်အတူတကလေးငယ်များသည်သူတို့၏ရပ်ကွက်ရှိအိမ်များသို့သကြားလုံးတောင်းရန်လာရောက်ကြသည်။ သူတို့ကိုမရရှိပါကသူတို့နေထိုင်သူများကိုဟာသအနည်းငယ်ပြောကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတကယ်မသိဘဲဥရောပတိုက်ရဲ့မူလပွဲတော်ကိုမေ့ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်နေပြီ၊ အမေရိကမှာရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံတွေမှာအောင်မြင်မှုများစွာနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။
Spring Break နှင့်ကျောင်းသားကမ္ဘာနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအမေရိကန်ဓလေ့ထုံးတမ်းများ
နွေ ဦး ရာသီကာလအတွင်းတစ် ဦး ကဖလော်ရီဒါကမ်းခြေ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူကြိုက်အများဆုံးဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများသည်ကျောင်းသားများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အထူးသ, သူတို့ထဲကနှစ်ခုအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
ပထမ နွေဦးပိတ်ရက် o နွေဦးပိတ်ရက်။ တစ်ချိန်ကထိုရာသီ၌တက္ကသိုလ်များကိုပိတ်ထားပြီးကျောင်းသားများကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားသည်။ များသောအားဖြင့်တကယ့်ကိုအရူးအမူးဖြစ်နေသည့်နေ့ရက်များကိုနေထိုင်ရန်နိုင်ငံ၏အပူဆုံးဒေသများသို့ပုံမှန်သွားလေ့ရှိသည်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ဤဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်သောနှင့်ပတ်သက်သောရုပ်ရှင်အများအပြားမြင်ကြပြီ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဥပမာအားဖြင့်သင်တို့ကိုငါပြောပါလိမ့်မယ် florida ၏ကမ်းရိုးတန်း ပါတီပွဲကိုပျော်မွေ့လိုသောလူငယ်များနှင့်သူတို့ပြည့်နေသည်။
ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒုတိယအစဉ်အလာသည် Homecoming။ ယခင်တစ်ခုနှင့်မတူသည်ကဖြစ်သည် တက္ကသိုလ်မှကြိုဆိုပါတယ် ကျောင်းသားသစ်များအတွက်။ သင်တန်း၏ဤပြန်လည်စတင်ရေးတွင်သင်ကြားရေးစင်တာများသာမကမြို့များနှင့်အခြားအဖြစ်အပျက်များမှတစ်ဆင့်ချီတက်ပွဲများကိုပြုလုပ်သည်။
ဒီထုံးစံမှာမင်းတို့ရှင်းပြမယ့်အများကြီးပိုပြီးလေးနက်တဲ့အသံရှိတယ်။ The သတိရအောက်မေ့နေ့ o သတိရအောက်မေ့ပွဲနေ့ ၎င်းသည်မေလနောက်ဆုံးတနင်္လာနေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့သောစစ်ပွဲများအတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအမေရိကန်စစ်သားများကိုဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
မူလက၎င်းကာလအတွင်းသတ်ဖြတ်ခဲ့သောစစ်သားများကိုမှတ်မိရန်ထူထောင်ခဲ့သည် ပြည်တွင်းစစ် သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်မြောက်အမေရိကတိုက်အားစစ်ပွဲကဲ့သို့သောပconflictိပက္ခတွင်ကျရောက်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့နဲ့ငါတို့နှိုင်းယှဉ်နိုင်တဲ့ဒီနေ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ် သန့်ရှင်းသော Innocents ၏ပွဲ။ မူလအစသည်ရှေးဟောင်းအခြေချနေထိုင်သူများကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်၎င်းတို့ထက် ပို၍ လိမ္မာပါးနပ်စွာပြရန်လှုံ့ဆော်လိုသောဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ Aprilပြီ ၁ ရက်တွင်သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောက်နေပါကသတိထားပါ၊ သင်ပြက်ရယ်ပြုခြင်းခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထူးဆန်းသည်မှာမြောက်အမေရိကနိုင်ငံသည်၎င်းကိုကျင်းပသောတစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ပေါ်တူဂီနှင့်ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံများတွင်လည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကျွန်းအစဉ်အလာတွင်ပင်တွေ့ရသည် Minorca.
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအကြောင်းကိုသင်တို့အားပြောပြပြီးပြီ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကောက်ခွန်နှင့်အစဉ်အလာ။ သို့သော်မြောက်အမေရိကနိုင်ငံတွင်အခြားသူများစွာရှိသည်။ ဥပမာ၊ သမ္မတနေ့ဖေဖော်ဝါရီလတတိယမြောက်တနင်္လာနေ့တွင်ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်၏မွေးနေ့ကိုကျင်းပသည်။ ဒါမှမဟုတ်အားကစားမှာ NCAA မတ်လရူးသွပ်မှုအဓိကတက္ကသိုလ်ဘတ်စကက်ဘောအသင်းကိုနောက်ဆုံးအဆင့်တွင်အတူတကွပေါင်းစပ်ပြီး၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » အမေရိကန် » အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အကောက်ခွန်နှင့်ဓလေ့ထုံးစံ